Imba yekugezera uye Chimbuzi zvekushambadzira zvemakambani nevanhu vamwe nevabereki WillieJan
Quote chikumbiro wholesaler
Bhati uye shawa inobata
Mahwindo ekudzimisa - Magirazi anopukuta
Kuveura Magirazi - Gadzira Up Magirazi
Marara emabhini ekupfeka kwaLadies
Mapepa Towels Dispensers
Mapepa Towels Starter Sets
Shower rinovira uye zvikamu
Bhidha sprayers | Dzvinya maoko ekugezesa maoko
Kurembera mabhureki emvura yekugeza
Kurembera mabhureki ekusvina mawoko emvura
Toilet Svina Maoko Mvura Inonaya
Mabheji ekugeza | Shower tap
Batsira uye tsemura matepi
Sink chisanganiso matepi
Utsanana Napkin Bags
0 zvinyorwa€ 0.00
✅ WillieJan® NL Mutengo
✅ Marplast Imupota
✅ Mari yekudzoserwa garandi
✅ Kurumidza Kuendesa
WillieJan Radieta tauro kuomesa rack 90MW - Muchena - mashanu matanda - 5 cm - Radiator chinamatira - Pasina kuchera
Kukoshesa 4.75 kubva pa5
€ 53.00 kusanganisira VAT
Iwe unogezawo here mangwanani uye paunoomesa unoona kuti tauro rako rakanyorova uye rakanyorova? Ipapo iri rack ndiyo mhinduro yako. Sunga matauro ako akanyorova ne radiator yako uye anogara achidziya uye kuoma. Zvakare zvakarongedzwa zvine hunyanzvi uye pani inogona kusungirirwa kune yekugezera dhizaina radiator pasina kuchera.
WillieJan Radiator tauro kuomesa rack 950W - Muchena - 1 tsvimbo - 46 cm - Radiator chinamatira - Pasina kuchera
Kukoshesa 5.00 kubva pa5
€ 38.00 kusanganisira VAT
Iwe unogezawo here mangwanani uye paunoomesa unoona kuti tauro rako rakanyorova uye rakanyorova? Ipapo iri rack ndiyo mhinduro yako. Sunga tauro rako nyoro neiri radiator kuitira kuti igare ichidziya uye yakaoma. Zvakare zvakarongedzwa zvine hunyanzvi uye pani inogona kusungirirwa kune yekugezera dhizaina radiator pasina kuchera.
WillieJan Diverter Tap Shower - Chromed Brass - Yekubatanidza saizi 3 x 1/2 ″
€ 33.00 kusanganisira VAT
Nyore kubatanidza 1 zvigadzirwa kune 2 pombi. Unogona kuchinja pombi (kubva pane imwe nzira kuenda kune imwe). Dzinenge dzose pombi dzekugezesa muNetherlands neBelgium dzine tambo ye1 / 2 to yekumhanyisa pombi yako yekugezesa. Unogona kuisa vharuvhu yekuchinja pakati kuti iwe uve nekubatana kwechipiri. Ndokumbira upime usati waodha (ona mifananidzo yehukuru)
Marplast bepa tauro rinopa A59211 - chena - kugona - machira mazana matanhatu - eC, Z uye akapetwa akapetwa matauro
€ 30.00 kusanganisira VAT
Pepa tauro rinosvitsa nehukuru hukuru kusvika pamashizha mazana matanhatu. Izvi zvinokwana ese ari maviri Z, C uye akapindirwa akapetwa mapepa matauro aine akapetwa kudzika anosvika gumi nemaviri cm uye upamhi hweanosvika 600 cm.
Marplast bepa tauro rinopa A83010ENE - Nhema - kugona - machira mazana matanhatu - eZ, C uye V akapeta matauro
€ 43.00 kusanganisira VAT
Pepa tauro rinosvitsa nehukuru hukuru kusvika pamashizha mazana matanhatu. Izvi zvinokwana zvese zviri zviviri Z, C uye V-zvakapetwa mapepa matauro ane rakapetwa kudzika anosvika gumi nemaviri cm uye upamhi hweanosvika makumi maviri neshanu masendimita.
WillieJan Radiator tauro kuomesa rack 940W - Muchena - 1 tsvimbo - 36 cm - Radiator chinamatira - Pasina kuchera
Kukoshesa 4.80 kubva pa5
Marplast sipo yekuparadzira A71401NE - Hunyanzvi hwehunhu - Dema neChiratidzo - 550 ml - Inokodzera nzvimbo dzeruzhinji.
Yakasimba kwazvo nyanzvi sipo yekupa, iri nyore kuzadza nekudurura sipo pamusoro.
WillieJan Towel rack Multi isina simbi
€ 73.00 kusanganisira VAT
Yakakura multifunctional tauro rack yakaitwa yemhando yakasungwa simbi isina simbi. Hapana asingasviki manomwe matanda ekurembedza matauro ako ese uye / kana kuzviisa pamusoro. Iyo tauro rack inogona kusungirirwa nyore kumadziro kuitira kuti matauro ako arongedze uye anogona mweya uye kuoma.
WillieJan Yakakura Towel Rack 7305 - Yakakweshwa simbi isina tsvina - 60 cm - Multifunctional
WillieJan Pepa matauro Z-peta - Yakamanikana kudzoka - Cellulose - 3 x 200 zvidimbu
€ 13.00 kusanganisira VAT
Yakasimba 1-ply mapepa matauro akagadzirwa nechero cellulose. Aya akapetwa kaviri kuitira kuti musana ungori masendimita masere chete paupamhi kuitira kuti vakwane mune zvinonzi zvakaderera zvekuparadzira. Yakasunurwa, matauro ane saizi yevakuru ye2 x 8 cm kuitira kuti iwo akakwana zvakakwana kuti atore hunyoro hwakawanda.
WillieJan Midi roll inobata - Kuchenesa bepa dispenser - Matt Stainless simbi - Professional Hunhu
Simbi isina Stainless Dispenser yeMidi rolls yemapepa ekuchenesa ane hukuru hukuru hwemapumburu anosvika mazana matatu emamita emapepa Inokodzera rolls nekusunungura kubva pakati.
WillieJan Pepa tauro Multifold - Nhete kumashure - 2 ply - Premium Cellulose - 4 x 150 zvidimbu
Inotsiva chinyorwa 99535A300, inokodzera mune isina kudzika mapepa matauro madhishi kubva kuMarplast, pakati pevamwe; Yakasimba 2-ply mapepa matauro akagadzirwa nechero cellulose. Aya akapetwa kaviri kuitira kuti musana ungori masendimita masere chete paupamhi kuitira kuti vakwane mumidziyo isina kudzika zvishoma. Kana zvabhedhenurwa, matauro acho ane saizi yechikuru ye2 x 8 cm kuitira kuti akure zvakakwana kuti atore hunyoro hwakawanda.
WillieJan Pepa tauro Multifold - Nhete kumashure - 2 ply - Premium Cellulose - 25 x 150 zvidimbu
Inotsiva chinyorwa 99535A3DS, inokodzera mune isina kudzika mapepa matauro madhishi kubva kuMarplast, pakati pevamwe; Yakasimba 2-ply mapepa matauro akagadzirwa nechero cellulose. Aya akapetwa kaviri kuitira kuti musana ungori masendimita masere chete paupamhi kuitira kuti vakwane mumidziyo isina kudzika zvishoma. Kana zvabhedhenurwa, matauro acho ane saizi yechikuru ye2 x 8 cm kuitira kuti akure zvakakwana kuti atore hunyoro hwakawanda.
WillieJan Svina ruoko rwekugezera HD2058 - ABS - Nhema
€ 18.00 kusanganisira VAT
Yakanaka compact svina ruoko shawa. Nekutsikirira chimbuzi chekugezesa, mvura inobuda uye unogona kuchenesa zvinehutsanana muviri wezasi muchimbuzi.
WillieJan Dzvanya Ruoko Shower Set HD035 - ABS - Nhema - Sprayer, Spiral Hose uye Hanging Bracket
€ 26.00 kusanganisira VAT
Yakanaka compact svina ruoko shawa, izere neyakakura hosipaipi uye madziro ekumisikidza bracket. Nekutsikirira chimbuzi chekugezesa, mvura inobuda uye unogona kuchenesa zvinehutsanana muviri wezasi muchimbuzi.
WillieJan Knijp ruoko rwekugezera Set HD035 - ABS - Nhema neChrome - Sprayer, PVC Hose uye Yakarembera Bracket
€ 28.00 kusanganisira VAT
WillieJan Shower njanji 16904 - Stainless simbi chubhu
€ 23.00 kusanganisira VAT
Yakapatsanura shawa inotsvedza bhaa ine inotsvedza yekugezera musoro uye mabhuraketi ekumisikidza madziro akagadzirwa nechrome-plated simbi isina tsvina uye ABS.
WillieJan Shower njanji 16903 - simbi isina tsvina chubhu - ine sipo ndiro
Yakaparadzanisa shawa yemasiraidhi bhaa ine yekutsvedza yekugezera musoro wekubata, sipo dhishi uye madziro ekumisikidza mabhureki akagadzirwa echrome-yakafukidzwa simbi isina simbi uye ABS
WillieJan Shower njanji 16902 - Isimbi simbi chubhu - ine inogadziriswa ekugadzirisa mapoinzi
WillieJan Shower njanji 16901 - Stainless simbi chubhu
Matipi & Nhau
Chii chaunogona kuita nezve mushure mekudonhedza shawa musoro?
13 October | Mazano ehutsanana
Chii chaungaite nezve yekudonhedza shawa musoro? Musoro wekugezesa unowanzodonha mushure uye kunyangwe mushure menguva yakareba mushure mekunge waushandisa. Unogona kuverenga zvaunogona kuita nezvazvo mune ino chinyorwa.Musoro wekugezera une rakapamhamha pamberi pekamuri iro rinodikanwa kufambisa majeti. Nehurombo, izvi zvine mukana wekuti kana ukadzima pombi kuti pane mvura pamberi pemba ...
Mapepa matauro anotengesa adzoka mudura
21 March | Mazano ehutsanana
Pepa tauro vanogashira vadzoka muzvitoro Kubva nezuro pane stock yemapepa mataipi vanogashirazve. Ita nekukurumidza nekuti parizvino pane zvakanyanya kudiwa kwezvigadzirwa izvo zvinoderedza njodzi yekutapurirana kwecorona chiratidzo. Izvi zvine chekuita nezvigadzirwa zvatinotakura; Vanopa sipo; Shamba maoko uye ...
Inowoneka hutachiona hweCorona
04 March | Mazano ehutsanana
Kushaikwa kuri pedyo nekuda kweCorona Virus Nekuda kwehutachiona hwekorona kana hutachiona hweCOVID-19, pane kudiwa kukuru kwezvigadzirwa zvinoderedza mukana wehutachiona. Nekuda kwekudiwa kwakanyanya, kugadzirwa hakukwanise kurarama mu2020.Pari zvino, izvo kudiwa kwadzikira zvishoma uye isu tinotarisira kuti stock yezvinhu izvi ichadzorerwa munguva pfupi ...
Nzvimbo yakaturika chimbuzi chekuisira
24 January | Ndinoisa kupi zvinhu zvangu zvekugezera?
Nzvimbo yekuturika chimbuzi chekubatira Pane iko chaiko pasina yakatemwa mitemo yekuturika chimbuzi chekubata. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti kana ugere pachimbuzi, mupumburu uri mukati mekusvika uye unogona kuvhurwa wakagara pasi. Izvo hazvifanirwewo kupinda munzira. Mukuita, izvi zvinoreva kuti zvakanaka kubvisa madota e ...
Isa zvikorekedzo zvewadhiropu mukati memukova wako wekugezera
21 December | Zano rekugezera kwako
Kuisa zvikorekedzo zvewadhiropu mukati memukova wako wekugezera Une shawa diki kana imba yekugezera. Zvakadaro, iwe unoda kusungirira mbatya dzako zvakanaka paunenge uchigeza kana kugeza. Zano rakangwara nderekuisa zvikorekedzo zvewadhiropu mukati memusuwo wemba yekugezera. Chii chaunofanira kutarisisa pakutenga uye / kana kuisa hokoreti yewadhiropu; Yako ...
sipo yekuparadzira pamadziro
06 December | zvinogadzirwa
Kutenga sipo itsva yekuparadzira madziro? Kune rusvingo nyowani rwevanopa sipo iwe wauya panzvimbo chaipo paWillieJan. Tine zvese simbi isina simbi uye epamusoro epurasitiki sipo yekuparadzira kumadziro. Vanopa sipo pamadziro mumhando dzakasiyana uye mavara. Zvese zvakavanzika uye zvekushandisa zvine hunyanzvi ....
Matipi uye Nhau
Dhirivhari uye yekubhadhara ruzivo
Garandi & Zvichemo
Ngoro yekutengera 🛒
2004 - 2022 © WillieJan | WillieJan® chiratidzo chakanyoreswa cheBathweb
Kukoshesa kwe www.williejan.com pa Webshop Keurmerk Kuongorora kweVatengi iri 9.1 / 10 yakavakirwa pa417 ongororo.
Muri Ngoro yako yekutengera